मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी- जीवन र जगत - Jagaran Post
Home/थप/कला साहित्य/मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी- जीवन र जगत
मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी- जीवन र जगत
२०७७ बैशाख ३०, मंगलवार १०:३८ गते
जीवन एक कला हो, त्यसमा हाम्रो जन्म पहिलो कला हो भने जीवन दोश्रो कला हो । पहिलो कला सृष्टि हो । दोश्रो कला स्थिति हो । जन्म पश्चात् जीवनलाई सफल बनाउनु महान वीरता हो । जीवनमा सफलताको लागि इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति र कर्मशक्तिको सदुपयोग गर्नुपर्छ । शुभ इच्छा र त्यसअनुसार कर्म गर्ने व्यक्तिले नै ज्ञान शक्ति प्राप्त गर्छ । जब निराकार आत्मा, साकार शरीर, इन्द्रिय र मनको साथ मिल्छ, तब शरीरमा शक्तिको सञ्चार हुन्छ । जन्म भएपछि आफ्नो पूर्णशक्तिको विकास गर्नु जीवनको लक्ष्य हो ।
जीवनमा यस महान् स्वार्थ सिद्धिको लागि परामार्थ सिद्धिको आवश्यकता पर्छ । यही कारण हो कि जीवनको सफलताको लागि सदाचार, उच्च विचार, शुभ संकल्प, विनयशिलता र श्रमशक्तिको परम आवश्यकता रहन्छ । सबको साथ सहभागी हुँदै प्रेमपूर्वक कार्य गर्नु, शुभ इच्छा, श्रम तथा साहस र इमान्दारीबाट धन कमाउनु, धनलाई धर्ममा लगाउनु र त्यसबाट ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्दछ । यही प्रक्रियाबाट जीवनलाई आन्तरिक शक्ति प्राप्त हुन्छ । जुन स्थितिलाई शास्प्रभा कल्याण भनिएको छ । कल्याण प्राप्त गरेमा मात्र व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, परतन्त्रता, राग, द्वेष, मृत्यु, भय लगायतका विकारहरुबाट बचेर परमानन्दको भोग भोग्न पाउँछ । यसैको नाम नै जीवन हो । हर मानव जीवनमा मलाई सुख छ, मलाई कुनै दुःख पिडा, अशान्ति छैन भन्ने यो संसारमा विरल्लै मात्र पाउन सक्छौं होला, चाहे महान् धनाढ्य नै किन नहोस् या गरीब नै किन ? जबसम्म मनभित्र लोभ, लालच अहंकार, घमण्ड, इष्र्या रहन्छ, तबसम्म यो मानवजीवनमा कहिल्यै सुख हुनेछैन । संसारका हर प्राणीमा आ–आफ्नै नियम, कर्तव्य, आत्रा खाना र रुचाइ हुन्छ । जस्तै खानाको रुपमा बाघले कहिले घाँस खाँदैन, गाईले कहिले मासु खाँदैन, त्यस्तै घोडा कहिले बस्दैन र कर्तव्य, गुणी, आज्ञापालकमा कुकुर जस्तो प्राणी अरु कोही छैन । संसारका हर प्राणी हामी मानव जाती बाहेक सबैको आ–आफ्नो नियममा बसेकै हुन्छ । तर विडम्बना विवेकशील, चेतनशिल प्राणीमा सर्वश्रेष्ठ भएर पनि हामी मानवजाती अरु प्राणी सरह न कर्तव्य पालन, आज्ञाकारी र गुणी नै हुन सकेका छौं । खानाकै कुरा गर्ने हो भनेपनि हामी घाँस देखि मासु सम्म सबै खान्छौं । मौका पाए सबै गुण, कर्तव्य बिर्सेर, आफ्नै आमाबुबा समेतलाई तिरस्कार, अपमान गर्न पछि पर्दैर्नौं । उदाहरणको रुपमा बलिउड चलचित्र “पाकिजा”की नायिका गीता कपुर बिरामी हुँदा आफ्नै छोरा राजा कपुरले आमालाई अस्पतालमा छोडेर भागेका थिए।
साथमा हाम्रो जीवन र समय बारे भन्नु पर्दा जीवन र समय भनेको एउटै रथका दुई पांग्रा हुन् । समयको साथसाथै जीवन पनि बितिरहेको हुन्छ । समयको आफ्नै सिमा, आफ्नै गति हुन्छ, साथमा निश्चल र निष्पक्ष पनि । उसलाई धनी–गरीब, शक्तिवान, रुपवान, रोगी–निरोगी, कसैको केही परवाह हुँदैन । दिनरात हुँदै समयले कसैलाई पर्खेर बसेको हुँदैन । समय नै पूmल, समय नै काँडा भनिन्छ । “पुरुषको भाग्य र स्त्रीको चरित्र कुन बेला कुन रुप लिने हो ? देवताले पनि केही भन्न सक्दैन रे ।” समय किन्न सकिन्न, तर गुमाउन सकिन्छ । समय रोक्न सकिन्न, तर उचित प्रयोग गर्न सकिन्छ । समय कहिले स्थिर रहँदैन, पृथ्वी मात्र घुमेको हुन्छ । सूर्य कहिले न अस्त हुन्छ, न उदय बरु पृथ्वीमात्र घुमेकोले सूर्यको तेजशक्ति जहाँ पर्छ, त्यहाँ दिन, जहाँ पर्दैन त्यहा रात हुँदै अन्धकार हुन्छ । त्यस्तै यसरी नै समयको गतिसंगै सूर्यपनि तलमाथि, तलमाथि भएको हुन्छ । जब समयनुसार सूर्य माथि गएको बेला पृथ्वीमा सूर्यको तेजशक्ति टाढिन गई जाडो मौसम सुरु हुन्छ र नजिक भई गर्मी मौसम शुरु हुन्छ । यस्तै समय कै अस्थिरताले नै ग्रह राशी पनि घुमिरहेको हुन्छ । त्यसै अन्तर्गत हामी प्राणी जातिको दिन दशा ग्रह पनि घुमिरहन्छ । कहिले सुख त कहिले दुःख । समयकै खेलले हाम्रो सोचाइ–विचार पनि परिवर्तन हुन्छ । विहान एउटा त, दिउँसो एउटा, रात परे पनि अर्कै । समय कै कारणले हर प्राणीलाई सुरु बालक, त्यसपछि युवा, फेरि पुन उसको मस्तिष्क कमजोर हुँदै गई वृद्ध रुपी बालक, सरह नै भएको हुन्छ । त्यसकारण भनिन्छ, “समय आउँछ, पर्खिदैन, बगेको खोलो फर्किदैन रे ।” प्रत्येक प्राणीमा यसको निरन्तरता हुने भएकोले, हामी मानव जाती, विवेकशील, चेतनशील, सर्वश्रेष्ठ नाताले ग्रहण रुपी नजरले जीवनको, समयको ख्याल गरी युवा जीवनको कतिको महत्व छ त ? हेरौं ।
समयको गतिसंगै जीवनको महत्वपूर्ण काल भनेकै युवा जीवन हो । यही युवाकालमा जीवनलाई सहि मार्ग, सहि दिशा, राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो । जसको सहयोग विना कुनै पनि राष्ट्रको विकासको कल्पना गर्नु व्यर्थ छ, त्यसकारण युवाहरुको क्षमता र उनीहरुलाई सहि बाटामो ल्याउने योजनाको अभिवृद्धि गर्नु नितान्त जरुरी छ । जन्म पश्चात जीवनलाई सफल बनाउनु महान वीरता हो । सफल जीवनका तीन सुत्र हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
मस्तिष्कमा समझ्दारी काँधमा जिम्मेवारी हृदयमा इमान्दारी
जीवनमा हर युवा व्यक्तिले यी तीन सुत्र मन्त्रलाई धारण गर्नु आवश्यक छ । जीवनमा सफलताका लागि इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति र कर्मशक्तिको सदुपयोग गर्नु नितान्त आवश्यक छ । यी सबै युवा पिढीका लागि मूल मन्त्र हो । शुभ इच्छा र त्यसअनुसार कर्म गर्ने व्यक्तिले नै ज्ञानशक्ति प्राप्त गर्दछ र उसको जीवनमा कहिले दुःख पिडा भोग्न पर्नेछैन । साथमा युवा वर्गले सर्वप्रथम आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु आवश्यक छ । जब शरीर, निरोगी, बलियो भए मात्र उसले सबै कामकुरा गर्ने सार्मथ्यवान हुन्छ, शरीर नै रोगी, अस्वस्थ भए मनले चाहे पनि गर्न सक्दैन ।
त्यसकारण स्वस्थजीवनको लागि औषधिमूलोका रुपमा आजकाल मात्र हैन योग प्रविधि औषधिमूलोको प्रभाव हुनुभन्दा पहिले यस मानव संसारमा योग प्रविधिबाट स्वस्थ रहन सक्ने ज्ञान उहिलेका ऋषि महात्माहरुले यसको प्रयोग गरी सफलता हासिल गरेका थिए । योग, साधना, यस्तो साधना हो, सजको नियमित साधना गर्न सके कुनै रोग व्याधीले छुनै सक्दैन, यसतर्फ पनि ध्यान दिनु नितान्त आवश्यक छ ।
यसरी यी माथिका सम्पूर्ण कुराहरुमा आजका युवा पिढीहरुले मात्र हैन पहिलेका सफल युवाहरुले पनि यसको अनुशरण गरी सफलता हाँसिल गरेको हुनुपर्छ । यस्तै हर मानव जीवनमा युवाकाललाई सकेसम्म महत्वका साथ ध्यानपूर्वक नियालेर हेर्नु पर्दछ । यही युवाकाललाई चाहे घरगृहष्ठीमा होस् या देशका लागि किन नहोस् ? यसको महत्व ठूलो छ । चाहे घर निर्माण या देश समृद्ध बनाउने अधिकार भनेकै सही युवाहरुको काँधमा हुन्छ । जब ती युवाहरुलाई सहिमार्गमा ल्याउन सकेमात्र घर या देशको निर्माण मजबुत हुन्छ । यहि ती युवावर्गहरुलाई युवा समयमा सहि मार्गमा ल्याउन सकेन भने भविष्यमा यसले विकराल रुपलाई निमत्याउन पछि पर्नेछैन । यसका लागि जिम्मेवार उसको जन्मघर मात्र होइन, देश निर्माणको नेतृत्व हाँकेको देशका ठूलाबडा नेताहरुको पनि कर्तव्य दायित्व हो । हामी हाम्रो मानवजीवन भनेको प्राणीहरुमा सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रुपमा जन्मिएपछि उसले यो कुराको पनि ख्याल गर्नु पर्छ कि, मैले म जस्तै अरुको पनि भलो चिताउनु पर्छ । कसैलाई पनि नराम्रो व्यवहार गर्नु हुँदैन । सबैमा आ–आफ्नो जीवन हाँसी खुसी बाँच्न पाउने अधिकार छ । तसर्थ मैले सबैको सम्मान गर्नुपर्छ, जस्तो म त्यो सम्माम अरुबाट चाहन्छु, कसैले मलाई गाली गर्दा, पिट्दा जसरुी मलाई दुख्छ, मनमा चोट पर्छ, अरुमा पनि त्यस्तै हुन्छ भनि बुझ्नु वा हेक्का राख्नु पर्छ । त्यस्तै म मानिस भएर जन्मिसकेपछि मैले जस्तै अरुको अनुहारमा पनि हाँसो दिनुपर्छ, चाहे अरु कुनै दिन नसकूँ, सधैं साथ दिन नसकूँ तर उनीहरुलाई मेरो कारणले कुनै दुःख पनि नदिऊँ । यही हो हामी सबै मानवजातीले बुझ्नु पर्ने, जीवनमा मनन् गर्नु पर्ने । यही बारेमा महान ग्रन्थ गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, “तिमी अरुलाई त्यस्तो व्यवहार नगर, जुन अरुले तिमीलाई गर्दा तिम्रो चित्त दुख्छ ।” हो पक्कै पनि एकले अर्काको सम्मान गर्ने, विचार सुनि दिने, घमण्डीपना नदेखाउने, राम्रो र सम्मान व्यवहार गर्ने, अनि सबैको अनुहारमा खुसी अनि हाँसो छर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसैभित्र लुकेको छ, समाजको शान्ति, खुसी अनि समृद्धि पनि । अरुलाई हँसाउने, खुसी बनाउने प्रयास गर्दा आफ्नो मुहारमा पनि जानी नजानी हाँसो र सन्तुष्टिको किरणहरु आएका हुन्छन् । अनुहार हँसिलो, मनमा सन्तुष्टि र स्वस्थ शरीर, यो भन्दा बढी के नै चाहिन्छ र हाम्रो जीवनमा ?
यसरी युवावर्ग भनेकै देश, समाज, राजनैतिक, संस्कार, आदि इत्यादि कुराको मेरुदण्ड हो । जसको सहयोग विना कुनै पनि राष्ट्रको विकासको कल्पना गर्नु व्यर्थ छ । त्यसकारण युवाहरुको क्षमता, उनीहरुलाई सही बाटोमा ल्याउने योजनाको अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यही सही बाटोमा लानको लागि निर्देशित गर्ने नेतृत्व वर्ग नै सक्षम र इमान्दारी हुनु नितान्त जरुरी छ । चाहे घरमूलीको अभिभावक नै किन नहोस्, भनिन्छ “तेल के हेर्नु ? तेलको धारा हेर्नु रे” भने जस्तै । जब उक्त युवावर्गलाई निर्देशित गर्ने अभिभावक या नेतृत्व वर्ग नै असक्षम, इमान्दार छैन, स्वार्थी छ भने उसबाट उत्पादित हुने युवाबाट राम्रो हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु बेकार छ । यसको उल्टो आजका राजनैतिक नेतृत्वका भूमिका निभाउन नेतृत्व वर्ग या समाजको नेतृत्व गर्ने, वर्ग नै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ती सही युवावर्गलाई समेत आफ्नो हनुमान कार्यकर्ताका रुपमा परिचालित गरेको हुन्छ ।
त्यसकारण ती सही युवावर्गहरुले मेरो नेतृत्ववर्गले या अभिभावक जस्तोले मलाई या हामीलाई कुन मार्ग या बाटोमा लैजाँदैछ भनि आफै स्वयमले निर्क्याेल गर्नु आवश्यक छ ।
यही कुरालाई मनन गरी वर्तमान सरकारले लागु गर्न खोजको, शिक्षित बेरोजगारका लागि परियोजना कर्जा नीतिलाई स्वागतयोग्य मान्नु पर्दछ । जसले गर्दा देशमै काम गर्ने सोच भएका बेरोजगार युवालार्य सरकारले परियोजना कर्जा दिने नीतिले गर्दा रोजगारका लागि विदेश पलायन हुने युवाहरुको लागि हौसला हुनेछ र आफ्नै मातृभूमिको विकास गर्न, कुन युवालाई मन पर्दैन होला ? यसको लागि सकारात्मक संकेत दिनु हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूलाई सम्पूर्ण बरोजगार युवाहरुका तर्फबाट मुरीमुरी धन्यवादको पात्र हुनेछ । पूmलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काडै संसार । संकारात्मक सोच्ने मान्छेको चहेरा फूल झैं प्रश्न हुन्छ । यसको मुखबाट मह निस्किन्छ र आँखाबाट शितलता निस्किन्छ ।
कतिपयले जीवनलाई एउटा संघर्षको गोरेटो मानेका छन् भने कतिले जीवनलाई मोजमस्तीको रुपमा लिएका छन् । हो वास्तवमा भन्ने हो भने जीवन भनेको आआफ्नो तरिकाले कसरी जीवन यापन गर्नेमा भर पर्छ । कतिको जीवन सुखमय हुन्छ भने कतिको दु:खमय हुन्छ । मलाई लाग्छ जीवन भनेको एउटा फुलिरहेको फुल जस्तै हो । जसरी फुल फुलीरहँदा त्यसको बासना मिठो हुन्छ । त्यस्तैगरी जीवनको पनि त्यतिकै महत्व हुन्छ ।
जब मानिस यो धर्तीमा जन्मिन्छ तब देखि जीवनको यात्रा शुरु हुन्छ । जसरी आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई लाखौ समस्या झेल्दै हुर्काएकी हुन्छिन त्यसरीनै मानिसले पनि आफ्नो जीवनमा लाखौ समस्याहरु झेल्दै जीवन यापन गरिरहेको हुन्छ । मानिसले जीवन पनि विभिन्न तरिकाले जीई रहेका हुन्छन् । कसैको जीवन सुखमय हुन्छ भने कसैको दु:खमय हुन्छ । कति मानिसहरुले रातदिन पसिना बगाएर पनि बिहान बेलुका छाक टार्नलाई समस्या हुन्छ भने कसैले कुनै दुख नगरी पनि जीवन यापन गरिरहेका हुन्छन् । वास्तविक यो हो कि जसले जसरी जीवनयापन गरिरहेको हुन्छ । आ-आफ्नो लागि त्यहि उचित भएको हुन्छ ।
अम्बिका कार्कीको डियर विप्लव काका…
२०७५ फाल्गुन ३०, बिहीबार ०४:२८ गते
साहित्यकार हिमोढ पहाडीको कालो सोमवार र राष्ट्रियताको उडान
२०७५ चैत्र ८, शुक्रबार १४:५६ गते
कवि हिक्मत थापाको अफ्रीका अनुभूति- यताको खबर
२०७६ चैत्र २४, सोमबार १७:०४ गते
शनिवार साहित्य – जागरण साहित्य
२०७५ फाल्गुन ११, शनिबार १०:०४ गते
संसद पुग्यो ‘गलबन्दी’ विवाद
२०७६ असार ९, सोमबार १७:१८ गते
महाभारत युद्धको रहस्य के थियो?
२०७७ जेष्ठ १५, बिहीबार ०४:३७ गते
भारतको भूमीमा नेपालले आँखा लगाऊन सक्तैन- भारतीय कानूनमन्त्री
२०७७ जेष्ठ १५, बिहीबार ०४:२५ गते